Taariikhda My Butros » Jacaylka ee 7 Talaabooyinka Easy
Hoos jacayl waa mid ka mid ah dareemada ugu sixir adduunka. Buuxsamay Naciimo daahir ah iyo raalli, isagoo jacayl qofka xaq ka dhigaa inaad dareento sida haddii aad ka adkaan kartaa wax. Markii aanu run ahaantii jeclahay qof, kulma farxad iyo murugo labadaba waa caddayn dhab ah oo ka mid ah daacadda faa'daysan doono xidhiidhka. Iyadoo jacaylka waa adag, hoos ku aynu tilmaamnay waxa jacayl yahay iyo sida si ay u gaaraan waarta jacaylka ee 7 tallaabooyinka fudud.
Step #1: Mid ka mid ah ayaa
Saaxiibkiisa ay nafsaddaadu ka sugayeen in la helay. Inta badan, aad isla markiiba la ogaado marka aad la kulanto aad kala bar kale, waayo, laba isku xiro iyo waxaad dareemi doontaa sida haddii aad weligiis garteen. Marka aad ka heli this, waxaa muhiim ah in la darso oo keliya wanaagsan ee. Raadinta ayna duleella in lammaanahaaga kaliya waxay keeni doontaa in xunuun. In ay qaataan qayb kasta oo lammaanahaaga iyo in soo laabashada Baro, waxaad heli doontaa daacad weligeed ah iyo jacaylka.
Step #2: Tiraan baahida lammaanahaaga
In xidhiidh kasta waxaa muhiim ah in baahidaada waa isu miisaamid la-hawlgalayaasha aad. Inta badan waxaad noqon doontaa bogga isku laakiin waxaa jiri doona qaar ka mid ah xaaladood iyo jeer marka baahidaada waa kala duwan. Waxaa muhiim ah in Naftaada halkooda dhig wehelkaaga si loo hubiyo in dhamaan baahiyahooda la kulmay.
Step #3: Dhageyso lammaanahaaga
Dhageysiga qof aad jeceshahay waa habka ugu fiican ee lagu barto cidda ay yihiin in lagu daro sidii aad u daboolaan baahidooda. Waxa kale oo ay kaa caawin doontaa in aad dareentid xidhiido lammaanahaaga, fahmo halka ay ku sugan yihiin halganka shakhsi, iyaga taageeraan in times of baahan, oo ogaan siyaabo kala duwan si ay u caawiyaan oo waxaan ka dhigi dhoola. Sida dadbaa, waxa aan si joogto barashada iyo kordhaya taas oo ah sababta dhagaysiga waxaa muhiim ah in ay ku ekaadaan jacaylka aad u xoog badan.
Step #4: Majeero lammaanahaaga
Daacadnimo mahadiyay kulli wixii wanaagsanaa oo ku saabsan lamaanahaaga iyo waxyaalaha fiican in ay u gacan ka geysanaya xoojinta curaarta. Sifada wanaagsan waxay sahlaysaa in aynu wax kale tagaan, iska indha ku mashquusho ah ee khilaafaadka, iyo in ay aqbalaan hawsha kor ku nool si wada-hawlgalayaasha aad ka filayso.
Step #5: Waqti la qaado lamaanahaaga
Markii ay si wadajir ah ku qaataan Qorshaynta waa muhiim si ay u koraan sidii laba qof oo. By waqti wada, waxaad ka heli doontaa inaad la wadaagto afkaartaada, dareenka, iyo dhibaatooyin. Iyada oo waqtigaan la wadaago, curaarta qoto doonaa sameynta saaxiib dhow ee intaa dheer in xiriir jacayl. Furaha jacayl daa'im ah waa in ay noqdaan kuwa ugu fiican ee asxaabta.
Step #6: Falid aad nolosha la wadaagto
Haddii aad u malaynayso in wax fiican, waxay ku odhan lammaanahaaga. Raxmadda waa sifo weli si xoog leh ka taataabtay dhif. In kasta oo ay qaadanayso nuglaanta si falid, meanness ugu danbeyn iska cuno ee iskaashi halka naxariis waxaa ababin.
Step #7: Romantic nool
Safarka A jaceyl ama uu farta ma aha oo kaliya la yaab leh ugu fiican laakiin waayo-aragnimo ku caawisaa in wax nool iyo dareen. Fahmida wax cusub wada caawin doonaan waxyaalo cusub oo xiiso leh qaawiyo oo ku saabsan midba midka kale.
In kasta oo dhacaya in jacaylka waa xiiso leh, sidoo kale waxaa muhiim ah in la ogsoonaado in hamiday iyo xoojinta la mid ma aha sida Shukaansiga. Love geesinimo iyo shaqada, oo waa isku jira ee dhinacyada badan oo kala duwan ka dhigaya jacayl xooggan. Laakiin mar jacaylka gaadho heerkaas adag, waxa uu noqonayaa mid dalalka taagero iyada oo khafiif, oo waa xiriir ah oo si dhab ah marnaba la jabin.